April 15, 2019 – Burmese.asia
ကျမဖာခံစားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောမိတဲ့ ဒီမိန်းကလေးရဲ့သနားစရာဖြစ်ရပ် video
ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ ရွှေညောင်ပင်ရပ်ကွက် ၂၀၁၉.၄.၁၅ရက်နေ့၁၂နာရီအတွင်းဖြစ်ပွါးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်..။ သနားပါတယ်ဗျာ.. ဝိုင်းရှယ်ပေးကြပါဦးနော်… နာမည်က မနီလာအောင် ပါတဲ့ အသက်က ၃၉ နှစ်ပါ နေရပ်လိပ်စာက မြောက်ဥက္ကလာ ဝေဘာဂီကလို့ ပြောပါတယ်။ ကျမကိုခေါ်လာတာ ဗျူတီကာလာ ခေါင်းလျှော်ဆိုင် အနှိပ်ခန်းဆိုပြီး ရန်ကုန်ကနေပြီး ပွဲစားအဒေါ်ကြီးက ခေါ်လာတာပါလို့ ပြောပါတယ်။ ဆိုင်ရောက်တော့ အနှိပ်ခန်းကို ဗန်းပြပြီးတော့ ဖာခံစားကြတာ..။ ကျမက ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ဖို့လာတာ ကျမ ဖာခံစားတဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်နိုင်ဘူးပြောတော့ ကျမကို ဝိုင်းရိုက်ကြတယ် ပါးတွေ နားတွေလည်း ရိုက်တယ်. တံမြက်စည်းတွေနဲ့လည်း ရိုက်တယ်။ ဆံပင်တွေလည်း အထွေးလိုက်ကျွတ်ကျကုန်တဲ့ အထိရရိုက်ကြတယ်။ အခုဆိုရင် ကျမဆီးအုံတွေရော ရင်ဘတ်တွေရော တအားအောင့်နေတယ်တဲ့..။ ကျမရဲတိုင်မယ်လို့ ပြောတော့ […]
တရားထိုင်တဲ့အခါ အနေအထား ပြင်သင့်မပြင်သင့် ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ကြီးမိန့်ပြီ
On April 15, 2019 April 17, 2019 By kyaw
မေး- တစ်ခြားသောရိပ်သာတွေမှာ တပည့်တော်တို့ တရားထိုင်တဲ့အခါမှာ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ပြီးတော့မှ မရွှေ့မပြင်တော့ပဲနဲ့ ဝေဒနာကိုတိုက်ရမယ်ဆိုပြီး အတင်းခံခိုင်းပါတယ်ဘုရား.. အခုတပည့်တော်တို့ဆီမှာ(ဖားအောက်တောရမှာ)ကျတော့ ပြင်ထိုင်ခွင့်ပေးပါတယ်.. သူတို့ဝေဒနာ တိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဝေဒနာနုပဿနာဟုတ်မဟုတ် သိလိုပါတယ်ဘုရား?.. ဖြေ- ဒါကတော့ (ပါဠိ)ဆိုပြီးတော့ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန်ကို ဖွင့်ဆိုတဲ့ အဋ္ဌကထာမှာ အဋ္ဌကထာဆရာတော်များက ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော့်.. ကွေးသင့်တဲ့အချိန်အခါမှာ ကွေးပေးရတယ်.. ဆန့်သင့်တဲ့အချိန်အခါမှာ ဆန့်ပေးရတယ်.. အဲဒီလို ကွေးသင့်တဲ့အချိန်အခါမှာ ကွေးပေးတဲ့ ယောဂစရဝပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာ ဆန့်သင့်တဲ့အချိန်အခါမှာ ဆန့်ပေးတဲ့ ယောဂစရဝပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာ ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာ ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေဟာ ဖြစ်ပေါ်မလာစေဘူး.. ဖြစ်ပေါ်မလာတဲ့အတွက် ဘာဖြစ်လဲ.. စိတ္တဧကံဟောန္တိ စိတ်က တည်ကြည်သွားမယ်.. စိတ်က တည်ကြည်သွားတဲ့အတွက် ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် တိုးတက်စည်ပင်ကြီးပွားသွားနိုင်ပါတယ် ဆိုပြီး အဋ္ဌကထာက ရှင်းထားပါတယ် သို့သော် […]
လမ်းလုပ်သားတွေနဲ့အခြားလူတွေအတွက် ရာသီစာဖျော်ရည်လေးတိုက်ခဲ့တဲ့ စံမြန်း
ပရိသတ်ကြီးရေ Mrtv 4မင်းသမီးချောလေး ဝင့်ယမုံနိုင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ နေရာတစ်နေရာရလာတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဝင့်ယမုံနိုင်က တက်သစ်စ မင်းသမီးလေးဆိုပေမယ့် အိုင်တင် အတက်အကျတွေက အပြစ်ပြောစရာမလိုအောင် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ဝင့်ယမုံနိုင်ရဲ့ ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ ချစ်စရာမျက်နှာလေးကလည်း အရမ်းလှတာဖြစ်လို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှပိုင်ရှင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင့်ယမုံနိုင်ကို ပရိသတ်တွေက အဝင့်လေးဆိုပြီး ချစ်စနိုးခေါ်ကြပြီး အခုဆိုရင်တော့ စံမြန်းဆိုတဲ့ နာမည်လေးကို ဝင့်ယမုံနိုင်တစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ။စံမြန်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးက ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ အရမ်းကို ရေပန်းစားသွားပြီး သူမကိုလည်း အရမ်းအားပေးလာကြပါတယ်။ဝင့်ယမုံနိုင်က စံမြန်း ဆိုတဲ့ဇာတ်ရုပ်လေးနဲ့ အရမ်းလိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတာဖြစ်လို့ ကျွန်မကမဟေသီ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးက ပရိသတ်တွေကို အရမ်းဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။ ဝင့်ယမုံနိုင်ကတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာခြေလှမ်းတွေစိပ်လာတာကိုတွေ့ရပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း သူမလေးရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အားပေးပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်း ဝင့်ယမုံနိုင်က မြန်မာ့နှစ်ကူးအတသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို […]
Drake ဆိုတာ ကတော့ ကနေဒီးယန်း နွယ်ဖွား နာမည်ကျော် ရက်ပါ အဆိုတော် တစ်ဦး ပါ ။ Drake ဟာ ရက်ပါ တစ်ဦး အဖြစ် ထင်ရှား ကျော်ကြား တဲ့ အပြင် ခုနောက်ပိုင်း နှစ်တွေမှာ သူ အားပေးတဲ့ အသင်း ၊ ထိပ်ထိပ်ကြဲ ကလပ် မှ ကစားသမား တွေဟာ ရှုံးပွဲတွေ ကြုံတွေ့ ရလေ့ ရှိတာကြောင့် သူဟာ ဘောလုံး အား ကစား ရဲ့ ဘူကောင် တစ်ဦး အဖြစ် လည်း ထင်ရှားလာ ပါပြီ ။ ထို့အတူ အခုတော့ ဥရောပ […]
MRTV4ရုပ်သံလိုင်းမှာ ည(၈)နာရီကျော်ဆိုတာနဲ့ ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရတဲ့ “ကျွန်မက မဟေသီ” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက အဓိက ပဲ့ကိုင်ရှင် မိန်းမချော လို့ခေါ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် သံသာမိုးသိမ့်က သူမရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားသူလေး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သံသာမိုးသိမ့်က ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာတော့ အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေကို သီချင်းဆို ဖျော်ဖြေပေးရင်း ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့မှာတော့ သံသာမိုးသိမ့်က ရမည်းသင်းမြို့က ပရိသတ်တွေကို သီချင်းတွေ အားရပါးရ ဆိုပြရင်း ဖျော်ဖြေပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သံသာမိုးသိမ့်တစ်ယောက် ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေပေးရင်း သူမကိုယ်တိုင်ကလဲ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေပြီး ချစ်စရာကောင်းနေတာမို့ […]
ရှင်ယွန်းမြတ် ကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုအမြဲဖမ်းစားလေ့ရှိတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်ကိုတော့ပရိသတ်တွေသိရှိပြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ချစ်စရာအပြုံးပိုင်ရှင်လေးဖြစ်သလို အမြဲစမက်ကျကျဖက်ရှင်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေအသည်းကို ခြွေချတက်သူလေးမို့ ပရိသတ်တွေသတိထားမိလာသူလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ အနုပညာလောကထဲကို မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကနေ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် သရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေနဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာပါပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ မြင်ရပါတယ်။ပရိသတ်ဝန်းရံမှုနဲ့အားပေးမှုတွေလည်းများစွာ ရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ယေနေ့မှာတော့ ရှင်ယွန်းမြတ်တစ်ယောက် သင်္ကြန်မှာ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပရိသတ်တွေကို သီချင်းတွေနဲ့အားပါးတရဖျော်ဖြေနေခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ ” သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ပခုက္ကူ”ဟိုတယ်ရိုးမ ပခုက္ကူ မဏ္ဍပ်” အကြိုနေ့က ပုံလေးတွေ နောက်နေ့ တင်မယ်နော်နားက နားကပ် ဘယ်အချိန် ပြုတ်ကျသွားမှန်းကိုမသိတာ “ဆိုပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးနဲ့အတူ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝတ်မှုန်​​ရွှေရည်ကတော့ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူမရဲ့မျက်နှာလေးကြောင့်ရော၊ အနုပညာပိုင်းမှာ ထူးချွန်တာကြောင့်ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်​​ရွှေရည်က ညို့အားပြင်းတဲ့ အမိုက်​စားပုံရိပ်​​တွေကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ တင်​လိုက်​တာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ အသွင်​​လေးနဲ့လည်း လိုက်​ဖက်​လွန်းတဲ့ ​ရွှေကစ်​​လေးက​တော့ ဒီလိုပုံ​လေးနဲ့လည်း တစ်​မျိုး​လေး ဆွဲ​ဆောင်​မှု ရှိ​နေပြန်​ပါတယ်​​နော်​။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက် ဆွဲ​ဆောင်​မှုရှိရှိနဲ့ လှရက်​လွန်းတဲ့ ​ရွှေကစ်​​လေးရဲ့ပုံရိပ်​​တွေကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ ​ရွှေကစ်​​လေးက​တော့ “Throwback “ဆိုပြီး သူမရဲ့ အလှပုံရိပ်​​လေး​တွေကို ​ဝေမျှ​ပေးထားတာပါ။ ဝတ်​မှုန်​​ရွှေရည်​က​တော့ လတ်​တ​လောမှာ သင်္ကြန်​အားလပ်​ရက်​ ခရီးထွက်​​နေတာပါ။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ဆွဲ​ဆောင်​မှုရှိတဲ့ ပုံစံ​လေးနဲ့ တစ်​မျိုး​လေး ကြည့်​​ကောင်း​နေတဲ့ ဝတ်မှုန်​​ရွှေရည်​လေးကိုချစ်ရင် share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
အင်ဒိုနီးရှား ဆူလာဝေစီပြည်နယ်က အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် ဖခင်တစ်ဦးဟာ သူ့သား လက်ထပ်မယ့် အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ၁၆ အရွယ် မိန်းကလေးကို အပျိုစစ်မစစ် ကိုယ်တိုင်စမ်းတာကြောင့် အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ ဖြစ်ပုံကတော့ အမ်အေလို့ သိထားရတဲ့ ဒီအမျိုးသားဟာ ဂျေဒဗလျူလို့ သိရတဲ့ သားရဲ့ ဇနီးလောင်းကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျုးလွန်တယ်ဆိုပြီး အမှုဖွင့်ခံရတာပါ။ ယောက်ခထီးလောင်း အမ်အေကတော့ သူဟာ ချွေးမ အပျိုစင် စစ်မစစ်ကို စမ်းတာပါလို့ ဆိုနေပါတယ်။ သူ တော်ရမယ့် ချွေးမဟာ အပျိုပဲ ဖြစ်နေသေးလားဆိုတာ ခဏခဏ စမ်းရတာကြောင့် မကြာခဏ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စမ်းရခြင်းပဲလို့ အမ်အေက ၀န်ခံပါတယ်။ မိန်းကလေးဟာ ယောက်ကျားလေးသူငယ်ချင်း များတာကြောင့် […]
ကိုရီးယားမှာအလုပ်သွားလုပ်တုန်းက သူများအသက်ကယ်ခဲ့ဖူးတာကိုပြောပြတဲ့ နေမင်း
နေမင်းဟာဆိုရင် ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိထားတဲ့ မင်းသားတစ်လက်လည်းဖြစ်သလို အောင်မြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ နေမင်းက သူတပါးကိုလည်းကူညီတတ်သူတစ်ဦးပါ။ နေမင်းက မကြာသေးမီက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကိုရီးယားမှာအလုပ်သွားလုပ်စဉ်က သူများအသက်ကယ်ခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းနဲ့မထင်မှတ်ပဲအကျိုးပြန်ခံစားရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြသွားပါတယ်။ နေမင်းက ကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်တုန်းက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကိုအသက်ကယ်ပေးခဲ့ဖူးကြောင်း “ကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာ အဲဒီအစ်ကိုက လက်ပြတ်သွားတယ်။ လက်ပြတ်သွားတော့ ကျွန်တော်သူ့လက်ကိုပြန်ဆက်ဖို့ကြိုးစားတာပေ့ါနော်။ ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ သူ့လက်ကိုချက်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲ ပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးသွားတယ်။သူဌေးကလည်း ဂိမ်းဆော့နေတာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေဘဝက သိတဲ့အတိုင်းပဲ သူဌေးကလည်းအဲလောက်ကြီးမရှိတော့ ကိုယ့််ဟာကိုယ်သူ့ကိုထမ်းပိုးပြီး နီးစပ်ရာဆေးရုံကိုရောက်တယ်။ လက်အော်ပရေးရှင်းလုပ်ဘာညာပေါ့”လို့ ပြောပြထားပါတယ်။ အဲဒီိလိုအသက်ကယ်ပေးပြီး ဒုက္ခရောက်နေခဲ့ရကြောင်းကိုလည်း “အဲဒီမှာ အဲဒီအစ်ကိုကတော့ သက်သာသွားတာပေါ့နော်။ မနက်သုံးနာရီလေးနာရီလောက်ထိ အရေးပေါ်ထဲမှာ။ ကျွန်တော်ကကျတော့ တစ်နေ့လုံးလည်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားတယ်။ ဘာမှလည်းမပါဘူး။ ပိုက်ဆံအိတ်လည်းမပါ ဖုန်းလည်းမပါ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးသူ့ဘေးနားမှာ ငုတ်တုတ်လေးထိုင်စောင့်နေတာ။ ကိုယ်က အသားကုန်ဗိုက်တွေကလည်းဆာနေပြီ။ ပေတလူးလည်းညစ်ပတ်နေပြီ။ ဆာလိုက် […]
ဘောလုံး သမား တွေ ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ တန်ဖိုးတွေ ကို အပတ်စဉ် တွက်ချက် သတ်မှတ် ဖော်ပြ ပေးနေတဲ့ Transfer Market သတင်း ဌာန ဟာ လက်ရှိ ဥရောပ ထိပ်သီး လိဂ် ၅ ခု က ကလပ် အသင်းတွေ က ကစား သမားတွေ ရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး တွေကို စုပေါင်းပြီး တန်ကြေး အမြင့်ဆုံး အသင်းတွေ ကို စာရင်း ပြုစု ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီ စာရင်း မှာ တော့ ဘာစီလိုနာ ၊ မန်စီးတီး ၊ […]